Smite (2014) မိတ်ဆက်
Posted by Fros on April 03, 2016
Game အမျိုးအစားကတော့ MOBA ဖြစ်ပြီးတော့ Dota လိုမျိုး Hero တွေကိုင် Lane တွေထိန်းပြီး ရန်သူ့ စခန်းသွားချိုးရတာပါပဲ။ ထူးခြားတာတခုကတော့ အပေါ်စီးကထိန်းချုပ်ရတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ထိန်းသလိုဖြစ်တဲ့ Third Person View နဲ့ဆော့ရမှာပါ။ နောက်တခုကတော့ Heroes တွေအကုန်လုံးက အခုလက်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိခဲ့တဲ့ Mythology ထဲမှ နတ်ဘုရားတွေကိုထည့်ထားတာပါ။ ဥပမာ Hindu God ဆိုရင် ရာမတို့ ကာလီ မယ်တော်တို့။ Egypt ဆိုရင် Ra, Anubis နဲ့ Greek ဆို Zeus တို့ Hades တို့လိုပေါ့။ နောက်ဆုံး Update အထိဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း Heroes God ပေါင်း 74 ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလောလောဆယ် မှာတော့ Japan ကနတ်တွေထည့်နေပါတယ်။
Game Mode တွေအနေနဲ့လည်း
Arena (No Lane)
Assault (1 lane ,5Vs 5)
Joust (1 Lane , Jungle ,3Vs 3)
Siege (2 Lane , Jungle , Special Titan ,4Vs 4)
Clash (2 Lane , Jungle ,5Vs 5)
Conquest (3 Lane , Massive Jungle , Titan ,5Vs 5)
Server အနေနဲ့လည်း Client တခုထဲကနေ NA , Europe , Australia server သုံးခုကနေ Ping အဆင်ပြေတဲ့ ဟာကိုချိတ်လို့ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Multiplayer နှစ်ဖွဲ့ဆော့ရင်ဆော့ မဆော့ရင်တောင် တဖွဲ့ထဲ Coop ဆော့လို့ရပါတယ်။ Online အခြေအနေမကောင်းရင်တောင် AI ထည့်ပြီးအပျင်းပြေ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်နေလို့ရပါတယ်။
Game size ကတော့9GB ပါ။
All credit to Original Writer ; Aung Kaung Zaw
Aung Kaung Zaw : "လိုချင်သူများ ငွေ 3000 ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
ဆက်သွယ်လိုသူများ Chat Box မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အခြားသော Free To Play Game များနဲ. Steam Client game များကို ကျွန်တော့်တွင်ရှိပါက ဈေးနှူန်းသက်သာစွာနဲ. Latest Version အထိရအောင် Backup လုပ်ပေးပါသည်။"
Game => http://store.steampowered.com/app/386360/